राति १२ बजेसम्म मर्मतपछि भरतपुरमा ३६ घण्टापछि बल्यो बिजुली – News Dainik
News desk १८ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०८:५८ उर्जा प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैँ । चितवनको बसेनी सबस्टेशन चार्ज भएपछि भरतपुर क्षेत्रमा ३६ घण्टापछि विजुली आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले गए राति १ बजेदेखि भरतपुरको औद्योगिक क्षेत्र बाहेकमा विद्युत बल्न थालेको जानकारी दिए ।
चितवनको भरतपुरका विभिन्न क्षेत्रममा बन्द विद्युत् सेवा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं दिनरात खटेर पुनः सञ्चालन गराएका छन् । विद्युत् अवरुद्ध भएको जनगुनासो आएपछि बुधबार दिउँसो भरतपुरको बसेनीस्थित सबस्टेसन पुगेका घिसिङ मध्यराति पनि पुगेर मर्मतका लागि निर्देशन दिएका हुन् ।
बिग्रेका पावर ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा परिवर्तनपछि राति १ बजेदेखि विद्युत् पुनः सञ्चालन भएको हेटौंडा ग्रिड महाशाखाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार भक्तपुरको ठूलो क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् ३६ घण्टापछि पुनः सञ्चालन भएको हो ।
यसअघि भरतपुर महानगरपालिकास्थित १३२÷११ बर्षेनी ग्रिड सबस्टेसनका दुई वटा पावर ट्रान्सर्फमरमा समस्या आएपछि भरतपुर महानगरपालिका–१ देखि १३ सम्म तथा २९ नम्बर वडा र तनहुँको देवघाट क्षेत्रमा मंगलबार दिउँसोदेखि विद्युत बन्द भएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङको टोली त्यहाँ बुधबार राति १२ बजेसम्म निर्देशन-अनुगमनमा खटेको थियो । विद्युतु चालु भएपछि अहिले बिहान कार्यकारी निर्देशक घिसिङको टोली काठमाडौं फर्किन लागेको टोलीमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।
अघिल्लॊ ट्रायल पास गरेको एक वर्ष बित्दा समेत हातमा छैन लाइसेन्स
पछिल्लॊ कस्तो रहला भाइटीकासम्मको मौसम ?
काठमाडाैँ । खोटाङका तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट १०.६ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा जोडिएका छन् । साप्सुखोला …
नेप्से परिसूचक उकालाेमा, ३.३३ अंककाे वृद्धि
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट रिफर गर्ने र पाउने दुवैलाई नेटटिभीसहित १ महिनाको इन्टरनेट प्याकेज निःशुल्क
अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘खल्ती’ ले ५ औं बार्षिकोत्सव मनायाे
ग्रीनसिटी अस्पतालमा साहाराका ग्राहक तथा राइडरलाई छुट
युनिमोनी कतारबाट ईसेवा मनी ट्रान्सफरको रेमिट्यान्स् सेवा सुरु
१३ माघ २०७८, बिहीबार १९:२२
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड कालिन्चोक दर्शनको बिक्री प्रवन्धकमा नियुक्त
१३ माघ २०७८, बिहीबार १९:०६
१३ माघ २०७८, बिहीबार १८:५०
माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई कोरोना संक्रमण
१३ माघ २०७८, बिहीबार १८:१८
१३ माघ २०७८, बिहीबार १६:४०
नेपालमा ८ हजार १७ संक्रमित थपिए, ५ हजार २९२ जना निकाे भए
सहिद सप्ताहको चौथो दिन आज : सहिद धर्मभक्त माथेमाको सम्झना गरियाे
कोभिड-१९ उच्च सङ्क्रमित विश्वका नौ देश
‘ओमिक्रोन भेरियन्ट लामो समयसम्म छालामा जीवितै रहन्छ’
काठमाडौँमा आफ्नै घरभित्र दम्पती मृत भेटिए